ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ အကျိုးစီးပွားများ စောင့်ထိန်းရန် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေး ဖြေရှင်းရန်လိုကြောင်း တရုတ်သံတမန်ပြော - Xinhua News Agency
ကုလသမဂ္ဂ (UN) ဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ကျန်းကျွင်း (ရှေ့တန် အလယ်) အား နယူးယောက်မြို့ရှိ UN ရုံးချုပ်၌ ဧပြီ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကုလသမဂ္ဂ၊ ဇွန် ၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေး ဖြေရှင်းခြင်းသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ အကျိုးစီးပွားများထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် လိုအပ်ကြောင်း တရုတ်သံတမန်က ဇွန် ၈ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံအားလုံး၏ လုံခြုံရေးသည် ခွဲခြား၍မရကြောင်းနှင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးသည်လည်း ပြင်ပမဟာဗျူဟာမြောက်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အနီးကပ်ဆက်စပ်နေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ကျန်းကျွင်းက ပြောခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် မကြာသေးမီက အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင် ရန်စမှုများပြုမူလျက်ရှိပြီး ဒေသတွင်း ဆက်စပ်သောနိုင်ငံများနှင့် ရေအောက်နျူကလီးယားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဟိုက်ပါဆိုးနစ်လက်နက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် နျူကလီးယားထိပ်ဖူးများသယ်ဆောင်နိုင်သည့် ခရုစ်ဒုံးကျည်များ ရောင်းချခြင်း စသည်တို့ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေက နျူကလီးယားမပြန့်ပွားရေးကိစ္စရပ်အပေါ် စံနှုန်းနှစ်ခုထားရှိခြင်းနှင့် သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်ခြင်းကို အတိအလင်းထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်” ဟု ၎င်းက ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေး ဆွေးနွေးပွဲ၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် အင်ဒို-ပစိဖိတ်မဟာဗျူဟာကို အားသွန်ခွန်စိုက် ဖော်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ဒေသတွင်း ဆက်စပ်သော နိုင်ငံများနှင့် စစ်ရေးမဟာမိတ်များ အားကောင်းလျက်ရှိရာ ယင်းမှာ ဒေသတွင်း စစ်ရေးထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနိုင်ခြေများ ပိုမိုဆိုးရွားစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
လွတ်လပ်သောဒေသတွင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးသည် နျူကလီးယားလက်နက်များအရေး သမိုင်းကြောင်းကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်း၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် နျူကလီးယားအရေး အဖြေရှာရေးလုပ်ငန်းအပေါ် ဆိုးဝါးစွာ သက်ရောက်မှုရှိခြင်းနှင့် ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးဝန်းကျင်ကို အဆိပ်သင့်စေခြင်း စသည့် အမည်ခံ နျူကလီးယားမျှဝေမှုအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် အဆက်မပြတ်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ကျန်းက ပြောခဲ့သည်။
“ဒါဟာ နိုင်ငံတစ်ခုခုရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေသာမဟုတ်ဘဲ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံရေးကို လောင်စာထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကို ပထမနေရာမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့၊ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်ကို ရပ်တန့်ရေး၊ လမ်းကြောင်းချက်ချင်းပြောင်းလဲရေးနဲ့ ကျွန်းဆွယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးဆီသို့ ကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးပေးရေးအတွက် နိုင်ငံတွေကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
အခြေခံအားဖြင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေး အဖြေရှာရန် အခြေခံအကျဆုံးမှာ နိုင်ငံရေးအခြေကျမှု၊ ဆွေးနွေးမှုနှင့် အကြံပြုဆွေးနွေးမှု အထွေထွေလမ်းကြောင်းကို လိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ကျန်းက ဆိုသည်။
သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများကလည်း ဆွေးနွေးမှုနှင့် အကြံပြုဆွေးနွေးမှုများသည် ကိစ္စရပ်ကို ဖြေရှင်းရန် မြင်သာသည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲ အဆင်ပြေချောမွေ့လာကာ အပြုသဘောဆောင်သော တိုးတက်မှု ဆောင်ရွက်ခဲ့ချိန်မှာပင် ဆွေးနွေးမှုများက လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးမှုများ ရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းများ ဖြစ်သွားချိန်၌ ကျွန်းဆွယ်၌ တင်းမာမှုများလည်း မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် နျူကလီးယားကင်းစင်ရေး စတင်ဆောင်ရွက်ချိန်ကတည်းက အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိ၊ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ တရားဝင်မှုနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုလည်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမရှိသလို ယင်းကိစ္စအား အဖြေရှာရေးအတွက် လိုအပ်သော ရိုးသားပွင့်လင်းမှုကို ဖော်ပြခြင်းလည်းမရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ဖြေလျှော့ရေးနှင့် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ အဆုံးသတ်ရေး စသဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံဘက်က ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသည့်အရာများစွာရှိကြောင်း၊ အဓိကမှာ ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကြိုတင်ကန့်သတ်ချက်မရှိသော ဆွေးနွေးမှုအတွက် အသင့်ရှိဟု ပြောဆိုခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ဇွန် ၈ ရက်ဆွေးနွေးပွဲသည် လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ဗီတိုအာဏာအသုံးပြု၍ အလိုအလျောက်အစည်းအဝေးခေါ်ယူခွင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အား အထွေထွေညီလာခံက ဧပြီ ၂၆ ရက်၌ အတည်ပြုပြီးနောက် ပထမဆုံးပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးဖြစ်သည်။ မေ ၂၆ ရက်တွင်မူ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့သည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်များ သတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသော လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို ဗီတိုဖြင့် ပယ်ချခဲ့သည်။ (Xinhua)
Resolving Korean Peninsula issue requires upholding security interests of regional countries: Chinese envoy
Source: XinhuaEditor: huaxia2022-06-09 03:59:44
UNITED NATIONS, June 8 (Xinhua) — A Chinese envoy said Wednesday that resolving the Korean Peninsula issue requires upholding the security interests of regional countries.
The security of all countries is indivisible, and the peace and stability of the Korean Peninsula is closely related to the external strategic environment, said Zhang Jun, China’s permanent representative to the United Nations.
The United States has recently been making provocations in the Asia-Pacific region, and has been carrying out nuclear submarine cooperation with relevant countries in the region, developing hypersonic weapons, and selling cruise missiles that can carry nuclear warheads, he said.
“These moves have completely revealed its double standards and hypocrisy on the issue of nuclear non-proliferation,” he toldaUN General Assembly debate on the Korean Peninsula issue.
The United States has been vigorously implementing its Indo-Pacific strategy and strengthening military alliances with relevant regional countries, which aggravates the risks of military confrontation in the region, he said.
A certain politician of an individual regional country was clamoring for so-called nuclear sharing with the United States, intentionally reversing the wheels of history on the issue of nuclear weapons, seriously impacting the process of resolving the Korean Peninsula nuclear issue, and poisoning the regional security environment, said Zhang.
“It is not in the interests of any country to stoke bloc confrontation in the Asia-Pacific region. We urge the countries concerned to put regional peace and security first, stop political maneuvering, change course immediately, and createagood environment toward peace and stability on the peninsula,” he said.
To fundamentally resolve the Korean Peninsula issue requires following the general direction of political settlement, dialogue, and consultation, said Zhang.
Historical experience shows that dialogue and consultation are the only viable way to resolve the issue. When dialogue advanced smoothly, positive progress was made; when dialogue was stalled or even backtracked, tensions on the peninsula escalated. Since the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) took denuclearization measures in 2018, the U.S. side did not reciprocate, did not address the DPRK’s legitimate and reasonable concerns, nor did it demonstrate the necessary sincerity for resolving the issue, he said.
Wednesday’s debate was the first of its kind since the General Assembly adoptedaresolution on April 26 that allows it to convene automatically whenaveto is cast in the Security Council. On May 26, China and Russia vetoedaSecurity Council draft resolution aimed to impose new sanctions on the DPRK, triggering the General Assembly meeting. ■
Photo : China’s permanent representative to the United Nations Zhang Jun (C, front) speaks duringaSecurity Council’s briefing on Ukraine at the UN headquarters in New York, April 5, 2022. (Xinhua/Xie E)